ကပျပါပေ့ ပီကရေယျ: ငရဲခွေးကြီး လွတ်နေပြီ
ပုံ - အိုးဝေမဂ္ဂဇင်း စာတည်းအဖွဲ့ (၁၉၃၆)
ပုံ - ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အလုပ်အမှုဆောင်များ (၁၉၃၆)
၁၉၃၆ ခုနစ် ဇန္နဝါရီလထုတ် အိုးဝေမဂ္ဂဇင်းမှာ ရေးသားပုံနှိပ်ခဲ့တဲ့ ငရဲခွေးကြီး လွတ်နေပြီ ဆိုတဲ့ ပေးစာတစ်စောင်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး မူရင်းရေးသားသူ (ညိုမြ) ရဲ့ နာမည်ကို မဖော်ထုတ်ပေးတဲ့အတွက် ၁၉၃၆ ခုနစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ အတူ ဦးနုကိုပါ တက္ကသိုလ်ကနေ ထုတ်ပယ်ပစ်လိုက်တယ်။ အိုးဝေမဂ္ဂဇင်းဟာ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား သမဂ္ဂအဖွဲ့က ထုတ်ဝေတဲ့ မဂ္ဂဇင်း တစ်စောင်ဖြစ်တယ်။ နောက်ပြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဟာ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား သမဂ္ဂအဖွဲ့ရဲ့ အတွင်းရေးမှူးလည်းဖြစ်၊ အိုးဝေမဂ္ဂဇင်းရဲ့ အယ်ဒီတာလည်း ဖြစ်တာကြောင့် သူ့မှာ အဓိက တာဝန်ရှိတယ်ဆိုပြီး သူတို့ကို ကျောင်းထုတ်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို ကျောင်းထုတ်ပစ်လိုက်လို့ ဆိုပြီး တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေ ဝိုင်းဝန်း ဆန္ဒပြရာက ဒုတိယကျောင်းသား သပိတ်ပေါ်ပေါက်လာတယ်။ အဲဒီလို မြန်မာသမိုင်းမှာ အင်မတန်မှ အရေးပါတဲ့ စာတစ်ပုဒ်ကို ရေးသားခဲ့တဲ့ နဂိုမူအတိုင်း ပြန်လည်ခံစားနိုင်စေဖို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ အပျောက်မပျက် ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ သဘောလည်း ပါပါတယ်။ အခုခေတ် လူငယ် အများစုဟာ ဒီစာကို ဖတ်ဖူးကြတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်လို မူရင်း အရေးအသားနဲ့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Escaped from Awizi,adevil in the form ofablack dog. Had been during his brief span on earthabase object of universal odium and execration, sentenced to Eternal Damnation for Treachery, Theft, Presumption, Intrigue, Pettifogging, Sadism, Churlishness, Vulgarity, etc. A pimping knave with avuncular pretensions to some cheap wiggling wenches fromawell-known Hostel, he was alsoahectic popularity-hunter, shamming interest in Games, Concerts, Associations, etc., menacing the public placed with his unwanted presence though generally welcomed everywhere as small-pox. His only distinguishing marks have been the abominable V.D. ulcers on his neck and buboes due to copulation with his own wife.
Thursday, September 10, 2009 | စာညှနျး ပီကေ့မှတ်စု, အရှေးအဟောင်းများ
ဤပို့စ်အား Thursday, September 10, 2009 နေ့တွင် ရေးသားထားပြီး ပီကေ့မှတ်စု , အရှေးအဟောင်းများ နာမည်ဖြင့် အညွှန်း သက်မှတ်ထားပါသည်။ ကွန်းမန့်များအား အချိန်နှင့် တပြေးညီ သိလိုလျှင် RSS 2.0 ဖြင့် တောင်းဆို၍ ရယူနိုင်သည်။ လာရင်းနေရာ သို့ ပြန်လည် သွားရောက်နိုင်ပါသည်။